(src)="3.5"> သို့မဟုတ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ၊
(trg)="1.1"> Wereldwijd : " One Day on Earth " op 10-10-10
(trg)="8.1"> Je kunt je nog steeds aanmelden om aan het project mee te doen .
(trg)="8.2"> Matt Lambert van het blog Motionographer geeft een mooie samenvatting van het resultaat :
(src)="6.1"> သို့သော်လည်း ဤဗီဒီယိုနောက်တစ်ပိုင်းအရ ထိုဗဟုသုတပွဲရတနာ သိုက်ကြီအား ကြည့် နိုင်ရန်သင်သည်၁ဝရက်၊
(trg)="8.4"> Maar volgens onderstaande video moet je eerst op 10-10-10 een video van 1 minuut uploaden voordat je toegang krijgt tot deze schat aan informatie .
(trg)="8.5"> Mis die kans niet !
(trg)="2.2"> Van de strijd tegen SOPA en PIPA in de Verenigde Staten tot wereldwijde inspanningen die een einde maakten aan de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak ( ACTA ) — dit alles heeft geleid tot een tijdgeest die staat voor internetvrijheid en openheid.
(src)="14.5"> ဖတ်နိုင်၊
(trg)="12.1"> Privacy : bescherm privacy en het recht van alle gebruikers om zelf te bepalen hoe hun gegevens en apparaten worden gebruikt .
(trg)="5.1"> - Opdat we het openlijke tirannieke regime en de ernstige mensenrechtenschendingen tijdens de regering van Marcos nooit zullen vergeten .
(src)="6.1"> - အကွီနိုအုပ်ချုပ်မှု ၏ အောပလန်ဘာဟာနီဟန်လက်အောက်တွင်လုပ်ပိုင်ခွင့် များချိုးဖောက်မှုများ ကျယ်ပြန့် လာခြင်းအပေါ်လေ့လာမိစေရန ်
(trg)="6.1"> - Opdat we nadenken over en onderzoek doen naar het nog steeds bestaande klimaat van straffeloosheid en alomtegenwoordige mensenrechtenschendingen onder de Oplan Bayanihan van de huidige regering-Aquino .
(trg)="7.1"> - Opdat we alle vormen van inperking van mensenrechten tegengaan en ons blijven inzetten voor gerechtigheid voor de slachtoffers en hun nabestaanden .
(trg)="7.2"> Het initiatief voor de online actie werd genomen door de mensenrechtenalliantie KARAPATAN en de organisatie voor families van slachtoffers van gedwongen verdwijningen , DESAPARECIDOS .
(trg)="10.1"> Ze spraken openlijk hun afkeuring uit over het toenemend aantal gevallen van mensenrechtenschendingen ; zo zijn er sinds president Noynoy Aguino in 2010 aan de macht kwam meer dan 11 gevallen van gedwongen verdwijning gedocumenteerd .
(trg)="12.3"> 30 augustus is the Internationale Dag van de Vermisten .
(trg)="15.1"> Judy Taguiwalo verving haar profielfoto door een lijst van een aantal van de ' verdwenen ' activisten
(src)="16.1"> လူဝီ အာ ( ခ်) ( စ်) ပိုဆာ ၏ ဓာတ်ပုံ
(trg)="16.1"> Foto van Louie Arches Posa
(src)="1.1"> ဆော်ဒီအမျိုးသမီးအာကစားသမားများ - အိုလံပစ်မှအပြန်တွစ်တာမုန်တိုင်းထန ်
(trg)="1.1"> Storm aan Twitter-reacties na optreden vrouwelijke Saudische atleten op Spelen
(src)="1.2"> ဤအပုဒ်သည်၂၀၁၂လန်ဒန်အိုလံပစ်အထူးရေးသားခြင်းအနက်မှ တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
(trg)="1.2"> Dit artikel maakt deel uit van onze speciale berichtgeving over de Olympische Spelen in Londen in 2012 .
(src)="8.1"> အလီ ခဒရာ ရေးသည်မှာ ၊
(trg)="7.1"> Ali Khadra schreef :
(src)="9.3"> မင်းလုပ်ခဲ့တာက ပိုပြီးကြီးကျယ်ပါတယ်။
(trg)="7.3"> Wat jij hebt gedaan is veel belangrijker .
(src)="9.4"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်# SaraAttar # Wejdan # Wijdan .
(trg)="7.4"> Bedankt #SaraAttar #Wejdan #Wijdan .
(trg)="7.5"> Bedankt #SaudiArabië .
(src)="9.7"> ဘဒါ အလ်ဂျီဟာနီက ဂုဏ်ယူစွာပြောသည်မှာ ၊
(trg)="7.7"> Bader Aljehani was apetrots :
(src)="9.9"> # SaraAttar ဆော်ဒီအားကစားအဖွဲ့မှာ ပါဝင်တဲ့သူတွေအားလုံးထက်ပိုပြီး မင်းနဲ့ဝိုဒန်အတွက်ငါတို့ဂုဏ်ယူပါတယ်။
(trg)="7.8"> @BooDzJ : #SaraAttar We zijn trots op jou en op Wejdan , meer nog dan op de andere atleten in het Saudische team !
(trg)="7.10"> Hij plaatste dit screenshot
(src)="9.12"> တွစ်တာပေါ်က @ WordWizard ရေးထားခြင်းဖြစ်သည်။
(trg)="8.1"> En Nada Abu beloofde :
(src)="9.16"> စိတ်ဓာတ်ခွန်အားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
(trg)="8.2"> @NadaAbu : Ooit zullen jullie mij zien winnen .
(src)="9.17"> # SaraAtta http : / / twitpic .
(trg)="8.3"> Bedankt voor de inspiratie #SaraAttar http://twitpic.com/agw7nn
(src)="9.19"> မင်း ငါတို့ကို သိက္ခာချတယ ်
(trg)="8.4"> Je hebt ons te schande gemaakt !
(src)="11.3"> မဟုတ်ဘူးကွ ။
(src)="16.1"> နောက်ဆုံးမှာတော့နူရာက နှိုင်းနှိုင်းဆဆ ပြောသွားသည်မှာ ၊
(trg)="13.1"> Nourah tenslotte probeerde de deelname van Sara te rechtvaardigen :
(src)="16.4"> ဤအပုဒ်သည်၂၀၁၂လန်ဒန်အိုလံပစ်အထူးရေးသားခြင်းအနက်မှ တစ်ပုဒ်ဖြစ်သည်။
(trg)="13.3"> Dit artikel maakt deel uit van onze speciale berichtgeving over de Olympische Spelen in Londen in 2012 .
(src)="1.2"> ဂရပ်( ဖ်) တီဆိုသောစာလုံးသည်ရေးသားသည်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော ဂရပ်ဖိန်းဟူသည့် ဂရိစာလုံးမှ ဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည်။
(trg)="1.3"> De hedendaagse graffiti is ontstaan in het New York van de jaren '60 en werd geïnspireerd door hiphop muziek .
(src)="1.4"> ခြယ်မှုန်းသူအနုပညာရှင်၏ ဂရပ်( ဖ်) တီအရေအတွက်မှာ ၄င်း ၏ ဂုဏ်ရည်နှင့် ကျော်ကြားမှုပေါ်တွင်မူတည်နေသည်။
(trg)="2.1"> Alhoewel deze kunstvorm soms onder de radar blijft en ondanks het feit dat autoriteiten veel geld spenderen aan het verwijderen van graffiti , heeft de straatkunst zich verspreid naar andere landen en is het populair geworden in vele steden .
(src)="3.2"> ထိုအနုပညာစုစည်းမှုကို အောက်တွင်တွေ့နိုင်ပါတသည်။
(trg)="2.2"> De ene keer zijn het persoonlijke krabbels de andere keer zijn het ware kunstwerken .
(src)="4.1"> အနာအဆာတွေကို စားပါစေ " ဟု ရေးထားသော နယူးယော့( ခ်) မြို့မှ ဂရပ်( ဖ်) တီ ။
(trg)="4.1"> " Let them eat crack " is de boodschap van deze graffiti in New York .
(src)="4.2"> ဖလစ်ကာအသုံးပြုသူ အိုမီဆို ၏ ဓာတ်ပုံ
(trg)="4.2"> Foto van Flickr-gebruiker Omiso .
(src)="6.1"> မန်ချက်စတာမြို့၊
(trg)="6.1"> In Manchester , VK .
(src)="6.2"> ယူကေတွင်ဆွဲထားသော " လူချမ်းသာတွေနှင့် အာဏာရှင်တွေက ငါတို့ကို ရှုံ့ချတာကို သတင်းဌာနတွေက မိုးရွာနေတယ်လို့ပြောနေကြတယ်"
(trg)="6.2"> " De rijken en machtigen zeiken over ons heen terwijl de media ons voor houdt dat het regent " .
(src)="8.1"> ( စာရေးသူ ရိုက်ကူးခဲ့သော ) အောက်ဖော်ပြပါပုံများသည်စပိန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်း ၊
(trg)="9.1"> Op de derde foto zie je de letters PP ( Spaanse Populistische Partij ) en PSOE ( Spaanse Socialistische Arbeiderspartij ) .
(src)="8.2"> ဂရန်ဒါ ၌ လမ်းလျှောက်သွားရာတွင်မြင်တွေ့နိုင်သော ဂရပ်( ဖ်) တီလှုုိင်းကို ဖော်ပြနေသည်။
(trg)="9.3"> Je ziet in de stad ook een muurschildering van kippen met als onderschrift " Gente presa , mercado libre " ( In een vrije markt is het volk prooi ) .
(src)="13.1"> " လူထု အတွက်ခုခံကာကွယ်ခြင်း "
(trg)="13.1"> " Ter bescherming van het volk "
(src)="14.1"> " ပညာရေးသည်ရောင်းရန်မဟုတ်"
(trg)="14.1"> " Onderwijs is niet te koop "
(src)="15.1"> အယ်လီနာ အရွန်တီ ( စ်) ၏ ဓာတ်ပုံ
(trg)="16.1"> In Madrid zie je veel graffiti van de bekende Baskische kunstenaar Alberto Basterrechea , die zeven jaar geleden begon met het schrijven van poëzie .
(src)="16.3"> သူ့ကဗျာများသည်တစ်ကို်ယ်ရည်အစွန်းဘက်ကို ဦးတည်လေ့ရှိခြင်း သို့မဟုတ်၄င်းတို့အတွက်တောင်းဆိုသံများ ပါဝင်နေခြင်းများ ပါလေ့ရှိပြီး အောက်ပါပုံများတွင်တွေ့ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
(trg)="16.2"> Hij is de auteur van twee blogs Neorrabioso en Batania waarop hij foto's laat zien van zijn gedichten geschilderd op muren in de Spaanse hoofdstad .
(src)="18.1"> " ဘာကို ပေးလွတ်လပ်၊
(trg)="17.1"> " ¿Confianza o con fianza ? "
(src)="19.1"> ကမ္ဘာ ၏ မည်သည့် အခြမ်းတွင်ဖြစ်စေ ၊
(trg)="18.1"> " Vrijwat , gelijkwie , broederwanneer " ( woordspeling in het Spaans op het beroemde Vrijheid , Gelijkheid , Broederschap ) .
(trg)="1.1"> De belangrijkste doodsoorzaak in ontwikkelingslanden zou u wel eens kunnen verbazen
(src)="2.3"> Ensia .
(src)="2.5"> ကမ္ဘာ့အသံတွင်စာမူဝေမျှခြင်းသဘောတူညီမှုအရ ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(trg)="2.2"> Het artikel werd hier opnieuw uitgegeven in overeenstemming met een overeenkomst om inhoud te delen .
(trg)="3.1"> Wat is de belangrijkste doodsoorzaak in landen met een laag en middelmatig inkomen ?
(src)="5.2"> ငှက်ဖျားရောဂါ နှင့် HIV / AIDS
(trg)="4.1"> A. slechte voeding en ondervoeding
(src)="7.2"> ဒါဆိုရင်တော့မှန်ပါတယ်။
(trg)="5.1"> B. tuberculose , malaria en HIV/AIDS
(src)="9.6"> မိုးကြိုးပစ်မှု ၊
(trg)="6.1"> C. vervuiling
(src)="11.2"> ၅ သန်းသည်HIV / AIDS ရောဂါ နှင့် သော်လည်းကောင်း ၉၃၀၀၀၀ သည်အဆုတ်နာ တီဗီရောဂါကြောင့် သော်လည်းကောင်း သေဆုံးခဲ့သည်။
(trg)="11.3"> Desondanks ontvangen organisaties meer dan 17,5 miljard euro per jaar van internationale liefdadigheidsinstellingen en overheden om deze trojka van vreselijke ziekten te bestrijden .
(trg)="12.1"> Traag en indirect
(src)="14.2"> ယင်းအစား ၄င်းသည်နှလုံးရောဂါ ၊
(trg)="14.2"> Probeert u zich dit scenario in te beelden :
(src)="14.11"> သို့မဟုတ်ကိုယ်လက်လေ့ကျင့် ခန်း နည်းပါးမှုတို့နှင့် အတူ ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်သော အရာတစ်ခုအဖြစ်တန်းတူ သတ်မှတ်သည်။
(trg)="15.1"> Je wordt elke dag wakker tussen het vuil in een hok dat jij en jouw gezin vastgebonden hebben met afgedankte materialen van een nabijgelegen bouwwerf voor een vijfsterrenhotel .
(trg)="15.4"> Hij ziet er iedere week meer uitgeput en magerder uit en je wil hem zeggen dat hij moet ophouden , maar hoe ?
(trg)="15.5"> Met het weinige geld dat hij verdient kan je de kinderen eten geven .
(trg)="16.2"> Het water dat je opschept uit het vijvertje is bruin en het stinkt naar menselijk afval , maar er is niets anders om te drinken .
(src)="16.6"> သူ့ချွေးနဲစာနှင့် ရှာထားသော တစ်ပဲတစ်ပြားဟာ သင့် ရဲ့ကလေးတွေကို ကျွေးနေသည့် တစ်ခုတည်းသော အရာဖြစ်သည်။
(trg)="16.3"> Je probeert het door een kaasdoek te laten sijpelen , maar het heeft niet veel zin .
(trg)="16.5"> De schoorstenen pompen slangen dikke rook de lucht in en wie weet wat er verbrand wordt .
(src)="17.7"> သင်၏ တခြား ကလေးများအားလုံးကတော့ချူချာနေပြီး အခြေခံကျပြီး လွယ်ကူသော အယူအဆ များကိုပင်နားလည်သင်ယူဖို့နှေးကွေးသည်။
(trg)="16.6"> Vorige week hoestte je oudste kind de hele nacht door .
(src)="17.8"> မိတ်ဆွေများ သို့မဟုတ်မိသားစုဆွေမျိုးများသည်လည်း သင့် ကို မည်သို့မျှ မကူညီနိုင်။
(trg)="16.7"> Je andere kinderen zijn bleek en hebben de grootste moeite om zelfs de meest elementaire basisconcepten te leren .
(src)="17.9"> အဘယ့် ကြောင့် ဆိုသော်သင့် ရပ်ကွက်အတွင်း လူတိုင်းနီးပါးသည်တူညီသော ပြဿနာများ ရှိနေကြေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(trg)="20.3"> Kwik afkomstig van goudmijnen en steenkoolcentrales kan nu gevonden worden in vis en er is al arsenicum gevonden in rijst .
(src)="19.1"> သင်သည်အဆိပ်သင့် နေသော ဆင်းရဲသူများအထဲမှ တစ်ဦးဖြစ်ကာ သင့် ၏ အသံကို ထုတ်ဖော်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိ ၊
(trg)="21.2"> Schone technologieën en groene groei zijn mogelijk voor opkomende economieën en kunnen decennia van toekomstige schade voorkomen die iedereen zal benadelen .
(trg)="22.2"> Die doelstellingen zijn er gekomen om te bepalen hoe we duurzaam kunnen blijven groeien nadat de millenniumdoelstellingen dit jaar verlopen .
(src)="19.3"> ဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေများကို ဆန့် ကျင်ဖို့ချမှတ်ပေးထားသော ဥပဒေများတော့ရှိချင်ရှိမည်သို့သော်တခုကိုမှ ထိရောက်စွာ ကျင့် သုံးခြင်းလည်း မရှိ ။
(trg)="23.1"> Door prioriteit te geven aan het voorkomen en de opruiming van vervuiling zullen niet alleen levens worden gered , het zal ook klimaatveranderingen verminderen en een positief effect hebben op biodiversiteit .
(src)="20.1"> ကျွန်တော်တို့ဤပြဿနာကို မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်မလဲ ။
(trg)="23.2"> Als we de programma ' s van grote internationale organisaties bekijken , zien we dat vervuiling een enorm lage prioriteit heeft in vergelijking met de impact die het heeft .
(src)="21.3"> ရွှေတူးဖော်ခြင်း နှင့် ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံများမှ ထွက်လာသော ပြဒါးများကို ကျွန်ုပ်တို့စားသုံးသော ငါးများတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပြီး အာဆင်းနစ်( အဆိပ်စိန်) ကို ဆန်ထဲ ၌ တွေ့ရှိနေရသည်။
(trg)="23.3"> De reden is waarschijnlijk dat deze organisaties niet voldoende bewust zijn van de impact van vervuiling en dat ze niet goed weten hoe ze deze complexe verzameling van problemen moeten aanpakken .
(src)="26.5"> ဤစာများသည်နောက်ဆုံး အတည်ပြုမည့် စာတမ်းတွင်ပါဝင်ရန်လိုအပ်သည်၊
(trg)="26.1"> De technologie en kennis om deze economische bedreigingen en gezondheidsbedreigingen aan te pakken bestaat in rijke landen .
(src)="26.6"> အဘယ့် ကြောင့် ဆိုသော်SDGs လာမည့် နှစ်များတွင်နိုင်ငံတကာနှင့် နိုင်ငံတော်အလိုက်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို သတ်မှတ်သွားနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
(trg)="26.2"> Oplossingen kunnen worden geïmplementeerd in landen met een laag en middelmatig inkomen voor een fractie van het geld dat in het Westen wordt uitgegeven om giftige stoffen van de industrialisatie tegen te gaan .
(src)="29.2"> ယင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ တသက်တာအတွင်းမှာ ဖြေရှင်း ၍ ရသော ပြဿနာတစ်ခုသာ ဖြစ်သည်။
(trg)="27.1"> Dit betekent dat vervuiling niet onvermijdelijk is , het is een probleem dat kan worden opgelost in onze tijd .
(src)="30.2"> သူသည်@ BlacksmithInst လိပ်စာဖြင့် twitter သုံးသည်။
(trg)="28.2"> Zijn Twitteraccount is @ BlacksmithInst .
(src)="1.2"> လာ့( စ ) ပါမီတား ( စ ) နှင့် အကြီးစား နံရံဆေးရောင်စုံရေးဆွဲမှုကြီး ၏ နောက်ဆုံးအဆင့် ။
(trg)="1.3"> Foto van de Facebookpagina van de Germen Crew , gebruikt met permissie .
(src)="4.4"> သူတို့၏ Facebook စာမျက်နှာက အခုလို ဆိုသည်-
(trg)="5.5"> Ons werk is een artistiek geschenk voor onze steden .
(src)="4.5"> ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ မြို့ရွာတို့အဘို့အနုပညာကို ပေးစွမ်းခြင်းဖြစ်သည်။
(trg)="5.6"> Door middel van kleuren , vormen , texturen en verschillende media delen we onze manier van kunst maken en wat we onder kunst verstaan .
(src)="4.9"> ကျွန်ုပ်တို့သွားရောက်ပါဝင်သော နေရာများတွင်နေထိုင်သူတို့၏ စိတ်အားထက်သန်မှု နှင့် စိတ်နှလုံးတို့ကို ခွန်အားဖြည့် ပေးခြင်းအားဖြင့် အလားအလာကောင်းများ ၏ မျိုးစေ့ကို ပျိုးရန်ကျိုးစားသည်။
(trg)="5.7"> We streven ernaar de kiem van het toekomstperspectief te laten ontspruiten door het gevoel en het enthousiasme van de bewoners van de plekken waar we naartoe komen te versterken .
(src)="4.10"> ကျွန်တော်တို့သည်အများပြည်သူနေရာများတွင်နေထိုင်သူများအတွက်ပိုမိုအသုံးဝင်စေရုံသာမက ပညာပေးမှုဖြစ်ပေါ်စေပြီး ၊
(trg)="5.8"> We willen een nieuwe bestemming geven aan openbare ruimtes door ze nuttiger voor de bewoners te maken .
(src)="4.15"> " သဟဇာတနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ခြင်းများ "
(trg)="5.12"> ' Zo veel eensgezindheid en vreedzaamheid '
(src)="4.16"> မီးပုံးပျံလွှတ်တင်ခြင်းနှင့် ပက်သက်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော အထက်ပါဗီဒီယိုထဲတွင်လာ့( စ ) ပါမီတား ( စ ) တွင်နေထိုင်သူများက ဤအနုပညာ လုပ်ငန်းများသည်ရပ်ကွက်အပေါ်တွင်အပြုသဘောဆောင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ရှိနေသည်ဟု မှတ်ချက်ချကြသည်။
(trg)="5.13"> In de video hierboven , waarin een workshop over wensballonnen te zien is , geven inwoners van Las Palmitas aan dat de creatieve activiteiten een positieve invloed op de wijk hadden .
(src)="4.17"> ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဒီဟာက ပွဲတော်နေ့တစ်နေ့လိုပဲ ။
(trg)="5.14"> Het is voor ons een feestelijke dag in de wijk , omdat we dingen meemaken die we nog nooit eerder meegemaakt hebben .
(src)="4.19"> ကျနော်တို့မိသားစုတွေအားလုံးမှာ သဟဇာတနှင့် အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်မှုတွေကို အများကြီးတွေ့ခဲ့ရတယ်။
(trg)="5.15"> Er is zo veel eensgezindheid en vreedzaamheid , vooral in onze gezinnen .